7-Tips Guide for Entrepreneurs (စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိကောင်းစရာများ)
7-Tips Guide for Entrepreneurs (စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိကောင်းစရာများ) ယနေ့ခေတ် စွန့်ဦးတီထွင်လူငယ်များအတွက် အောင်မြင်စေဖို့ရာ လို အပ် မည့် အချက် ၇ ချက် ကို EntrepreneurSme.com မှ စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
You will fail. That is part of the game. Your failures are most likely to lead to success if you get involved with something you believe in. Startingabusiness just for its own sake will leave you directionless, burned out and ultimately, back where you started. Choose an interest that you can be passionate about. Marrying charity to traditional business models may beagreat way to combine the things you – and potential consumers – care most about.
ကျရှုံးမှုဆိုတာရှိလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ကစားပွဲရဲ့တစ်စိတ်တပိုင်းဘဲ။ မင်းလိုချင်တာ မင်းရကို ရမည်လို့ ယုံကြည်ထားလျှင် ကျရှုံးမှုတိုင်းက အောင်မြင်မှုဆီခေါ်ဆောင်သွားလေ့ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အလို့ငှာ လုပ်ငန်းစစလုပ်ကိုင်ပြီးနောက် ရဲဝံ့စွာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် မင်းရဲ့ ဦးတည်ချက်မရှိမဲ့မှုတွေ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ မင်းစိတ်ထဲက ဆန္ဒအရှိဆုံးအရာကို ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါ။ အစဉ်အလာအရ လုပ်ငန်းတူ စီးပွားရေးခြင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် အလားအလာရှိစားသုံးသူတို့ကို အကောင်းဆုံးဂရုစိုက်ဖြင်းတို့သည် မင်းအတွက်အကောင်းဆုံး အောင်မြင်အောင်မြင်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Define your market. ( ဈေးကွက်ကိုဖော်ဆောင်ပါ)
You’ve heard this before. It’s one of the most common mistakes that entrepreneurs make. Go with something that makes sense for your scope. If you’reasmall startup and stillastudent, staying local or targeting fellow students might be the best direction. The Internet gives us almost infinite reach, but it’s vital to narrow your market down to what is realistic, and stick with those who haveareason to be interested.
သင်ဒီအကြောင်း ကြားဖူးပြီးသားပါ။ ဒါဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားတွေထဲက အကြီးဆုံးအမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွက် တစ်စုံတစ်ခုဆောင်ရွက်ရာတွင် စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသွားပါ။ သင်ကျောင်းသားဘ၀တည်းက အသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ခဲ့လျှင် ဒေသတွင်း ကျောင်းသားတွေကို ဦးတည်ချက်ထား လုပ်ဆောင်မှုသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အင်တာနက်က ကျွန်တော်တို့အတွက် အတိုင်းအစမရှိ ကျေနပ်မှုပေးတယ် သို့သော် ဒါက မင်းရဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ဈေးကွက်လေ့လာမှုထက်ပို ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ လက်တွေ့ လေ့လာမှသာ စိတ်ဝင်စားသော သူများနှင့် တွေ့ဆုံစေမှာ ဖြစ်တယ်။
Price point. ( ဈေးနှုန်းသက်မှတ်ချက်)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်ထူထောင်ရန် အရေးကြီးသောအရာမှာ စွန့်စွန့်စားစား ဆောင်ရွက်ခြင်း။ မင်းရဲ့ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှုဟာ ဖြစ်နိုင်လျှင် အခြေခံက စ၍ အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်အောင် စဉ်းစားပါ ( အနိမ့်ဆုံးအလားအလာထုတ်ကုန်)။ ငွေအများကြီးဖြင့် မစွန့်စားနိုင်ပေမဲ့ ငွေအရင်းအနှီးသေးသေးလေးကလည်း များပြားသော ၀ယ်ယူသူအသစ်များ နှင့် ထည့်ဝင်ပူပေါင်းမှုများကို ရရှိနိုင်သည်။ သင်ရဲကစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်က ငွေဖြစ်တယ်။ ငွေကြေးဟာ ဈေးကွက်နှင့် ဆက်စပ်နေသော အရာတွေကို ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ သင်ကျွမ်းကျင်လာသည်နှင့်အမျှ သင်အမြဲငွေကြေးနှုန်းတွေကို ပြန်လည် တွက်ချက်နိုင်တယ်။
Be honest. (ရိုးသားပါ)
This advice applies to yourself, your employees and your customers. Be honest about what you can commit to your business. It doesn’t do any good to over-extend yourself when in truth; you don’t have the cash or the hours to commit toaproject. Be honest about what your partners can expect from, and what you expect in return. And be honest with clients. At PilmerPR, our #1 rule is “First be good, then talk about it. ”
ဒီအချက်က (စားသုံးသူ နှင့် ၀န်ထမ်း) သင်အပေါ်မူတည်တယ်။ မင်းရဲ့ လုပ်ငန်းကို မင်းအပ်နှံတဲ့အခါ ရိုးသားပါ။ မင်းကိုယ်တိုင် မှန်တာမလုပ်ရင် ကောင်းတာလည်း ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းမှာ အချိန်ရော ငွေရော မရှိရင် စီမံကိန်းလုပ်လို့မရဘူး။ မင်းအဖွဲ့ဝင်တွေထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက် နှင့် ဘာတွေပြန်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ ရိုးသားပါ။ ဖောက်သည်များအပေါ်မှာလည်းရိုးသားပါ။ “ပထမကောင်းဆုံး ကောင်းမွန်ပြီး ဒီအကြောင်းကို ပြန်လည်ပြောပြရမယ်။”
Utilize, but don’t over-use, social media.
အသုံးပြုခြင်း သို့သော် လိုတာထက်မပိုပါစေနှင့် (လူမှုဆက်ဆံရေး) Young people are always eager to jump online, and that’s notabad thing. But it is important to think carefully before plastering marketing materials on the Internet. Social media is obviouslyapowerful tool.
Focusing it on your business can get word out quickly and cheaply. That said, be careful not to put all of your eggs in the online basket. Experiment and measure results, then constantly evaluate and decide what is working, and what you are wasting resources on.
ငယ်ရွယ်သူတွေဟာ အမြဲလိုလို အွန်လိုင်း သုံးတတ်ကြပြီး ဒါဟာ ဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်…။ သို့သော် အင်တာနက်ပေါ်က ဈေးကွက်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ပစ္စည်းများ ၊ plastering ကို ဂရုတစိုက်စဉ်းစားရန် အရေးကြီးပါသည်။ လှုမှုဆက်ဆံရးသည် သိသိသာသာ ကောင်းမွန်လှသော စွမ်းအားရှိ လက်နက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ လုပ်ငန်းကို အာရုံစိုက်ထားမှသာ စကားလုံးများ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထွက်လာပြီး သက်သက်သာသာဖြင့် ရရှိနိုင်မည်။ မင်းရောင်းရမဲ့ ကြက်ဥအားလုံး အွန်လိုင်းဈေးကွက်မှာ ရောင်းဖိုမလိုဘူး။
Don’t forget PR. (စာနယ်ဇင်းဆက်ဆံရေး)
ဓလေ့ရိုးရာနှင့် အွန်လိုင်းစာနယ်ဇင်း ဆက်ဆံရေး သည် ကွယ်ပျောက်သွားခြင်းမရှိဘဲ ပိုမို လွှမ်းခြုံလာပြီး ကြော်ငြာခြင်းထက်ပိုမို စရိတ်သက်သာတယ်။ မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ် ထုတ်တဲ့အခါ စိတ်ဝင်စားသူနှင့် ဆက်သွယ်နေသူများ အကြောင်းတွေးပါ။ တို့နောက် မီဒီယာတွေကို ပြောပြပါ။ မင်းရဲ့ တင်ပြချက်တွေကို ကျိန်းသေ ဆန်းစစ်ကြမယ် ၊ စာမျက်နှာတွေမှာ ဖော်ပြကြမယ် (သို့) သတင်းမှာ အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်လာမည်။ မြောက်များစွာသော မီဒီယာများက အဖွဲ့ခွဲများထားရှိပြီး ကျွမ်းကျင်သောလူများကို အဖွဲ့အစည်းတွင်း သတင်းတိကျစွာ ရနိုင်ရန်အတွက် နစ်မြုပ်ထားကြသည်။ မင်းကိုယ်ပိုင်သတင်းစာထဲက ဆောင်းပါးတစ်ခုဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် တန်ဖိုးရှိ အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
7.Look for mentors. ( လမ်းညွှန်ရှာဖွေပါ ) The beginning of any venture can be exhilarating, frustrating, liberating and terrifying all at once. Remember, although younger generations can be more tech-savvy than those who have been in business for years, there are still basic principles that are refined by experience. Many communities offer networking opportunities for entrepreneurs young and old.
Take advantage of this, and you may be surprised at the wealth of knowledge your colleagues have to offer. These tips won’t earn you certain success, but every bit of knowledge you can gather before you begin your entrepreneurial career can help you avoid serious mistakes.
မည်သည့်စွန့်စားမှုမဆို အစပိုင်းမှာ အံ့သြပျော်ရွှင်ခြင်း ၊ စိတ်ပျက်ခြင်း ၊ လွတ်ထွက်ခြင်း နှင့် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမျိုးကို တစ်ကြိမ်တော့ ကြုံဘူးကြမှာပါ။ အစဉ်အဆက် ငယ်ရွယ်သော နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှည်ကြာအောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်သော်လည်း ဒါဟာ အတွေ့အကြုံကြီးရင့်သောသူများ၏ အောက်ခြေအဆင့် ကြိုးစားမှုသာသာဘဲဖြစ်သည်။ မြောက်များစွာသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လူငယ်လူကြီးတွေအတွက် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်နိုင်ဖို့ အခွင့် အလမ်းများစွာရှိနေပါတယ်။
အားသာချက်ကို ယူပြီး မင်းရဲ့ ကြီးမားမျှော်မြင်ညဏ်ဖြင့် မင်းရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကို အံ့သြအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဤအကြံပြုချက်များဟာ သင့်အောင်မြင်မှုရဲ့ ငွေကြေးတော့မဟုတ်ဘူး။ အသိပညာနည်းနည်းချင်းဒီစုဆောင်းတာဟာ မင်းစတင်မဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းမှာ ကြုံတွေ့လာရမဲ့ ဆိုးဆိုးရွားရွားတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကူညီပေးလိမ့်မယ်။ KLLK